Thiago Silva oo ka hortagaya kooxdiisii hore, xiddigaha isku kooxda soo noqday, kuwa qarammada wadaaga & Saaxiibada uu caawa kulmin doono kulanka Porto & Chelsea – Gool FM
(Seville) 07 Abriil 2021. Kooxaha FC Porto iyo Chelsea ayaa caawa kulanka lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League ku wada ciyaari doona Magaalada Seville ee dalka Spain.
Saaxiibada uu kulmin doono kulanka caawa ee FC Porto iyo Chlsea halkaan hoose ka eeg:-
>- Malang Sarr oo haatan amaah oo uu kaga soo dhaqaaqay Chelsea kula jooga Porto ayaa kooxda reer England ee Blues waxa ay kala soo wareegay naadiga Nice bishii Agoosto ee 2020, waxaana uu u dhaqaaqay Portugal 06 bishii October ee hore.
>- Thiago Silva waxa uu waqti kooban ku qaatay Porto fasal ciyaareedkii 2004/05, waxaana uu u saftay 14 kooxda labaad ee Porto B.
Marko Grujić (Liverpool 2016–17, Cardiff amaah 2018)
Toni Martínez (West Ham 2016–19, Oxford amaah 2017)
• Felipe Anderson iyo Emerson Palmieri ayaa u soo wada ciyaaray kooxda reer Brazil ee Santos, waxaana ay wadajir u dheeleen xiddigaha da’doodu ka hooseyso 17-sano jirrada iyo 19-jirrada ka hor inta aysan wada metelin kooxda waa weyn ee Santos.
• Pepe iyo Marcos Alonso ayaa ku sugnaa Kooxda Real Madrid intii u dhexeysay 2007 iyo 2010, xiddiga reer Spain ayaa ka tirsnaa xiddigaha da’doodu ka hooseysay 19-jirada ee B iyo laacibka Portugal uu ka mid ahaa kooxda waa weyn ee Los Blancos, inkastoo ay jireen kulammo faro ku tiris ah oo ay wada ciyaareen xilli ciyaareedkii 2009/10.
• Pepe oo Portugal ka tirsanaa ayaa garaacay Olivier Giroud oo metelayey France ciyaar ku dhammaatay 1-0 kaddib 120 daqiiqo oo la ciyaaray kulankaasoo ahaa Final-ka UEFA EURO 2016, kana dhacay garoonka Stade de France.
• Kai Havertz ayaa goolkii ugu horreeyey ee qarankiisa waa weyn ka dhaliyey goolhaye Agustín Marchesín ciyaar xulka Germany ay barbaro 2-2 la galeen Argentina, taasoo ahayd kulan saaxiibtinnimo oo dhacay sanadkii 2019-kii.
• Havertz ayaa markale gool ka dhaliyey Marchesín labada lugood ee wareegga 16-ka UEFA Europa League xilli ciyaareedkii 2019/20, markaasoo ay Bayer Leverkusen guul ka gaartay Porto oo ay wajahday natiijada labada kulan ayaana ku dhammaaday 2-1 minin iyo 3-1 marti.
• Emerson Palmeiri ayaa garoonka laga saaray kulankii Roma ay garoonkeeda guuldarro 3-0 kala kulantay Porto isreeb-reebkii UEFA Champions League ee fasal ciyaareedkii 2016/17, waxaana cel-celis ahaan looga adkaaday 1-4, Jesús Corona ayaana dhaliyey goolkii ugu dambeeyey ee Porto, kaasoo uu caawintiisa lahaa Otávio,
• Fábio Vieira ayaa gool dhaliyey kulankii Porto ay guuldarro 3-1 kala kulantay Chelsea ee UEFA Youth League final fasal ciyaareedkii 2018/19, Romário Baró ayaa gool ka caawiyey Diogo Leite oo 90 daqiiqo ciyaaray kulankaas.